Fitsidihana An’i Salvadaoro | Tany sy Mponina
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kantôney Nentim-paharazana Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Malagasy Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Norvezianina Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Vietnamianina Xhosa Zoloa Éwé
Fitsidihana An’i Salvadaoro
CUSCATLÁN na “Tanin’ny Vatosoa” no niantsoana an’i Salvadaoro taloha. Tamin’ny 500 taona lasa no tonga tany ny Espaniola, ka nifanambady tamin’ny tompon-tany. Taranaky ny tompon-tany sy Eoropeanina izao ny ankamaroan’ny olona any.
Sariaka sy mazoto miasa ny mponina any, sady manaja sy mahalala fomba. Miarahaba foana ny olona, na dia rehefa hividy zavatra aza. “Buenos días” no fiarahabana rehefa maraina, ary “buenas tardes” rehefa tolakandro. Any ambanivohitra aza, heverin’ny olona ho tsy mahalala fomba ianao raha mahita mpandalo nefa tsy miarahaba.
Nisy vokany teo amin’ny tantaran’i Salvadaoro ny fambolena kafe
Sakafo malaza any ny pupusa: Tsaramaso sy fromazy, fonosina amin’ny mofo fisaka vita amin’ny katsaka na vary. Azo asiana henan-kisoa na zavatra hafa koa ao anatiny. Matetika ilay izy no aroso miaraka amin’ny saosy voatabiha sy curtido, izay tsy inona fa lasary laisoa sy karaoty ary tongolo nampiana sakay. Raisina amin’ny tanana ilay izy, na dia misy ihany aza mampiasa forsety sy antsy.
Sakafo be mpitia ny pupusa
Riandranon’i Los Tercios, any Suchitoto
FANTATRAO VE? Antsoina hoe tany be volkano i Salvadaoro. Misy volkano maherin’ny 20 any, ary mbola mety hipoaka ny sasany. Eo amin’ny Riandranon’i Los Tercios koa ahitana vato mahavariana, izay lavalava mitsangana sady misy rirany. Ary mbola volkano koa no nahatonga izany.
Misy Vavolombelon’i Jehovah maherin’ny 38 000 any Salvadaoro. Mizara ho fiangonana 700 eo ho eo izy ireo, ary mampianatra Baiboly olona 43 000, amin’ny teny espaniola sy anglisy ary tenin’ny tanana.
Mponina: 6 267 000
Renivohitra: San Salvador
Toetany: Mafana be ny morontsiraka sy ny lemaka any afovoan-tany, fa mangatsiatsiaka kosa ny faritra avo
Vohon-tany: Betsaka ny tendrombohitra marin-tampona
A. I Salvadaoro no firenena kely indrindra any Amerika Afovoany.
B. Raha jerena ny salanisan’ny mponina isaky ny velaran-tany, dia i Salvadaoro no be olona indrindra any Amerika Afovoany.
D. Masiaka be ny ankamaroan’ny sakafo any Salvadaoro.
E. Tena nanova ny tantaran’i Salvadaoro ny fambolena kafe.
Valiny: Marina ny A sy B ary E. Diso kosa ny D. Mpizaha tany maro no milaza fa tsy dia masiaka ny sakafo any.
Hizara Hizara Fitsidihana An’i Salvadaoro